War cusub: Tababare Arsene Wenger oo Ogolaaday in saddax sanno uu sii joogo kooxda Arsenal
HomeEnglandWar cusub: Tababare Arsene Wenger oo Ogolaaday in saddax sanno uu sii joogo kooxda Arsenal
Tababaraha Kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa qalinka dul-dhigi doona qadaraas cusub maalmaha soo aadan, kaddib markii ay kooxda isku afgarteen waqtiga mudda uu socon doono heshiiska cusub ee uu kooxdan la galayo. Wenger ayaa soo afjaraya shakigii ka taagnaa mustaqbalkiisa kooxda Waqooyiga London kaddib ku guuleysigii FA Cup horaantii bishan, waxana lagu wadaa in kooxda uu sii joogo tan iyo 2017ka.
Waxaa hore u jiray in 64 jirkan reer France uu kooxda ka tagi doono hadii uu ku fashilmo in uu soo afjaro Abaarta Koob la’aanta ee kooxda heysatay muddo sagaal sanno ah, laakiin Wenger ayaa guushii Wembley kaddib balanqaaday in uu sii joogi doono Waqooyiga London.
Sportsmail ayaa sheegeysa in Wenger uu saxeexi doono heshiis uu mushahar ahaan ku qaadan doono 8 milyan oo gani halkii xilli ciyaareed. Sidoo kale Arsenal ayaa u qorsheysay in 100 milyan oo gani ay farta ka saarto Macalinkan taasi oo ka dhigan misaaniyadii ugu badneyd ee Arsenal ugu talagasho suuqa taariikhda.
Sulley Muntari Oo Fuqarada Reer Brazil Lacag U Qaybiyey ( Video )
Xavi Oo Dhalleeceeyey Go’aankii Maxkamadda CAS Ku Xakamaysay Barca
Hargeysa: Dhallinyaro la Barray xirfadda Feedhka oo Xaflad Loo Qabtay + Sawirro